Sambalooshe oo Xog ka bixiyay Caqabadaha Amniga Muqdisho & Si Fudud oo looga bixi karo – XAMAR POST
Sambalooshe oo Xog ka bixiyay Caqabadaha Amniga Muqdisho & Si Fudud oo looga bixi karo
By Mohamed Ahmed On May 23, 2018
Agaasimihii hore ee Nabad Suggida C/laahi Maxamed Cali (Sambaloolshe) ayaa soo jeediyay tallooyin ku saabsan suggida ammaanka Magaalada Muqdisho oo Shabaab ay ka gaystaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
Sambaloolshe oo la hadlaayay Idaacada VOA, ayaa sheegay Muqdisho inay ballaaratay oo ay kobacday, sidaasi awgeedna muhiim inay tahay sameynta qorshe amni oo Magaaladan loo dajiyo, maadaama Shabaab xilli kasta isku dayaan fulinta falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
“Meeshaan Muqdisho dee Ex-Control ama Asluubta lagama koontarooli karo, markii ay dhacday dowladii dhexe Magaaladan si qayru caadi aheyn ayeey u kobacday, waxaa la rabaa Shabellada hoose, qaasatan Afgooye, Lafoole Siinka dheer iyo dhinacaan Jazeera in la dhigo Koontaroolo badan, lana geeyo qalab sahlaayo gaadiidka qaraxyada wada in lagu ogaado.” Ayuu yiri Sanbaloolshe.
Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida Somaliya C/laahi Maxamed Cali ayaa sheegay inay muhiim tahay kordhinta Koontaroolada gaadiidka lagu baaro, iyadoo ciidamada la siinaayo qalab badan oo amniga ay ku sugaan.
Wuxuu sheegay Sanbaloolshe dhiiragelinta iyo abaalmarinta ciidamada qabta shaqooyinka adag inay door ka qaadanayso qorshaha suggida ammaanka Magaalada Muqdisho.
Agaasimihii hore ee Nabad Suggida Somaliya ayaa talo ahaan dowladda u soo jeediyay Shabaab dhexdiisa inay ku yeeshaan xubno la shaqeeya dowladda, soona gudbiya xogaha Shabaab dhexdooda, taasina ay qayb ka qaadan karto suggida ammaanka.
Dowladda Somaliya ayaa si wayn waxaa loogu dhaliilaa inaysan daacad ka aheyn qorshaha suggida ammaanka Magaalada Muqdisho oo Shabaab ay ka gaystaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka.
Wararkii ugu Dambeeyay Dagaal Hub culus la isku adeegsaday oo ka dhacay Duleedka Muqdisho
AKHRISO: Puntland oo sheegtay in la dili doono Cidii taageerta Somaliland